Barnaamijka Cunnada ee SNAP MN - Macluumaad ku saabsan Faa'iidooyinka Kuubannada Cuntada ee EBT
Dhamaan Waxyaabaha Ku Saabsan Barnaamijka Cuntada SNAP ee Minnesota
SNAP, Barnaamijka Taakulaynta Nafaqada ee Dheeraadka ah, waa barnaamij nafaqeyn ah oo ay maalgeliso dowladda federaalka oo horey loogu yaqiinay kaararka cuntada. Waxay siisaa faa'iidooyinka nafaqada kaqeybgalayaasha uqalma, oo lagu bixiyo kaarka bangiga ee EBT (wareejinta elektaroonigga ah). SNAP waxaa laga heli karaa dhamaan 50ka gobol, oo ay kujirto Minnesota.
Ayaa U Qalma Gargaarka SNAP?
Badi codsadayaasha qaata SNAP waxaa ku jira laakiin aan ku xaddidnayn dadka dakhligoodu hooseeyo iyo qoysaska, dadka naafada ah iyo shaqsiyaadka waayeelka ah. Dowladda Federaalka waxay leedahay a qalab baaritaan bilaash ah waad isticmaali kartaa si aad uga caawiso go'aaminta u-qalmitaankaaga. Waxa kale oo jira jawaabo badan oo ku saabsan su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan barnaamijkan laga helay USDA boggeeda SNAP.
Haddii kale, su'aalaha ku saabsan u-qalmitaanka barnaamijka waxaad wici kartaa Khadka Tooska ah ee MN State at (888) 711-1151 ama (800) 657-3698 si aad ula hadasho wakiil bilaash ah. Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota SNAP bogga waxay bixisaa ilo SNAP oo dheeri ah, oo ay kujiraan qalabka baaritaanka SNAP ee Hmong, Ruushka, Soomaaliya iyo Isbaanishka, iyo waliba macluumaad ku saabsan codsashada lacagaha SNAP.
Sidee buu u shaqeeyaa Arjiga SNAP?
Haddii aad joogto Minnesota, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad iska qorto goobta Goobta Waaxda Adeegyada Aadanaha oo ku buuxi dukumintiyada lagama maarmaanka ah foomamka elektiroonigga ah ama waraaqaha ah. Mar alla markii aad gudbiso macluumaadkaaga waxaa lagaala soo xiriiri doonaa u-qalmitaankaaga iyadoo loo marayo wakiil gobol 30 maalmood gudahood. Haddii soo gudbintaada la oggolaado waxaad bilaabi doontaa inaad hesho kaarka EBT oo u shaqeeya kaarka bangiga ee iibsashada cuntada iyo cabitaanka.
Haddii aadan haysan dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah dhammaystirka dalabkaaga, weli waad saxiixi kartaa oo gudbin kartaa dalabkaaga si aad u bilowdo hawsha dib-u-eegista. Waxaad markaa bixin kartaa dukumiintiyada loo baahan yahay si loo buuxiyo arjiga. Marka la ansixiyo, dheefaha waxaa lagu bixin doonaa iyadoo lagu saleynayo taariikhda arjiga hore.
Waayeelka ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara kan gaaban codsi laba bog ah gargaarka SNAP.
Gargaarka Cuntada iyo SNAP Ma Isku Waxbaa?
Haa. Kaararka cuntada waxaa loola jeedaa labadaba barnaamijka iyo habka uu qofku ugu isticmaali karo lacagta federaalka inuu ku iibsado alaabada nafaqada leh. SNAP hadda waa magaca barnaamijka cusub iyo kaarka EBT waa habka shaqsi u adeegsado iibsashada alaabooyinka u qalma. Kaararka EBT waxaa lagu farsameeyaa dukaanka raashinka oo la mid ah kaarka deynta ama kaarka.
Muddo intee le'eg ayuu soconayaa Nidaamka Codsiga SNAP?
Degmadu waxaa looga baahan yahay inay jawaab ka bixiso dalabkaaga 30 maalmood gudahood laakiin xaaladaha degdegga ah hawsha waa la dedejin karaa illaa 5 maalmood.
Ma Jiraan Xayiraad Iibsashada EBT?
Cunnooyinka badankood waa u qalmaan, laakiin walxaha sida aalkolada, raashinka xayawaanka, fiitamiinada, iwm, ma awoodaan in lagu iibsado adoo isticmaalaya kaarkaaga EBT. USDA waxay qeexaysaa xuduudahan si faahfaahsan boggan.
Adeegsiga SNAP ee Cuntada Lugaha
Ma ogeyd in kaalmada cuntada ee SNAP sidoo kale loo isticmaali karo xagga qiimaha Cunnooyinka Gawaarida Lugta? Meals On Wheels waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee gaarsiinta cuntada Minnesota ee bixiya cunnooyin kulul oo caafimaad leh wixii baahi nafaqo ah. Naga soo wac (612) 623-3363 ama email noogu soo dir [email protected] oo leh dhammaan su'aalaha ku saabsan Cunnooyinka Wheels iyo u-qalmitaanka SNAP.
La-tashiga waa lacag la'aan waxaana la heli karaa Isniinta-Jimcaha 8:30 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Waxaan kaa caawin karnaa wixii su'aalo ah ee aad ka qabto oo ku saabsan codsashada SNAP oo waxaan kaa caawin karnaa inaad go'aamiso haddii Cunnooyinka Lugaha Adgu kugu habboon yihiin!